दाहालले भने- विक्षिप्त र बौखलाहट मानसिकता, नेपालले सुनाए नांगो राजाको कथा
‘यो पार्टी ओली एण्ड प्रचण्ड लिमिटेड कम्पनी होइन, दुबैलाई हटाउन सकिन्छ’
१६ असार, काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेकपाभित्र स्पष्ट वक्ता मानिन्छन् । यद्यपि उनी अहिलेको ध्रुवीकरणमा माधव नेपाल पक्षमा छन् । नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा …
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको श्रव्य दृश्य छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रेको बेलामा जस्तो बजेट आउनुप...
पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतमै सीमित हुन सक्छ : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
२९, चैत, चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चालु आर्थिक बर्षको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने बताएका छन् । चितवनको भरतपुरमा रहेको बोस्टन इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थीलाई ‘गेस्ट …
७ भदौ, काठमाडौं । भारतका पूर्वअर्थमन्त्री अरुण जेटलीको शनिबार दिउँसो निधन भएको छ । शनिबार दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा जेटलीको निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतीय लोकसभाका सांसाद समेत रहेका जेटली १५ …
१८ फागुन, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भएको छ । ८२ वषर्ीय नेता अधिकारीको हृयाम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार राति निधन भएको हो ।अधि कारीको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि भोलि आइतबार …
अनलाइनखबर माघ २०७५
डा. महतको अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त : मन्त्री यादव
काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अर्थनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री यादवले कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री महतलाई उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको उपाधि दिइएकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरे। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ...